Isithombe esihle ngesikhathi esifushane
Wonke amakhosikazi amaphupho wokuba nomfanekiso omuhle ngesikhathi esifushane. Sizokusiza ukuba ufinyelele umgomo wakho ngosizo lwezeluleko zethu. Ukuqaphela nokwethemba iseluleko sethu, uzothola ubuhle bomuntu omuhle futhi omuhle kakhulu .
Ukuze ufeze isithombe esihle kufanele uqale uhambo lwakho hhayi ngesiteleka sokulamba. Kufanele ubale isisindo sakho esihle futhi ulahle imikhuba yakho emibi. Ziqede ngokuphelele kusuka emnandi, okuneziphuzo, eziphuzweni ezidakayo nasezinkalweni ezinamafutha. Ekudleni kwakho kuhlanganisa kuphela imifino eluhlaza, utamatisi, amakhowe, izithelo, amajikijolo, imikhiqizo yobisi, ama-porridges e-oatmeal kanye nama-buckwheat kanye nesinkwa, kodwa kuphela kusuka kufulawa we-grinding.
Uma uvuka, uphuze ingilazi yamanzi noma ijusi lesithelo elihlanjululwe. Leli ketshezi lisiza ukuhlanza umzimba wezinto ezinobuthi ezibuthe ubusuku bonke. Ukudla kwasekuseni kwakho kufanele kwenzeke kuphela emva kwalolu hlelo, ngemuva kwemizuzu engama-20-30.
Gcina ithrekhi yezinga lamaprotheni. Yidla imikhiqizo eminingi yezinhlanzi, inyama yobisi kanye nokudla okunomsoco, kanye nezitsha ezivela kubhontshisi kanye ne-soy.
Kabili ngeviki baba izitshalo. Yidla amakhowe, i-pepper noma ama-eggplant. Ngicabanga ukuthi uqaphele ukuthi izitshalo eziningi zinezici ezinhle, ngoba azidli inyama. Futhi ngenxa yalokhu, basindisa amakholori ayizinkulungwane ngesonto. Ngicabanga ukuthi uzokwazi ukufezekisa ukuphelela kwesithombe esihle.
Zibeke emakhaleni nasezinongo, njengoba zidala umuzwa wendlala.
Isinkwa kufanele sibe yizinhlobo ezimnyama kuphela.
Ungalokothi uphuze, kungaholela emakhilogremu engeziwe. Uma ungeke ukwazi ukuziphikisa lokhu, faka ukudla okulula kwakho ngamantongomane angakhulumi, izithelo noma imifino. Ungakwazi futhi ukuzitholela nge-piece encane ye chocolatele emnyama, ngeke kube yimbi nakakhulu, futhi uzokwazi ukunciphisa ukulamba kwakho.
Uma ujwayele ukudla ngaphambi kokulala futhi ungakwazi ukubhekana nalokhu, udla kuphela ukudla okuphansi kwekhalori. Kodwa kunoma yikuphi, ungadli amahora amabili ngaphambi kokulala.
Ngaphambi kokuba uye esitolo ukuze uthole ukudla, qiniseka ukuthi udle.
Udinga ukudla, kancane kancane, ukuhlafuna ukudla kancane, ngakho-ke uzokuzwa ngokushesha ukuzwa.
Hlala ekuseni kuphela ngesisu esingenalutho. Ngakho-ke, uzokwazi ukulawula ukulahlekelwa kwesisindo sakho futhi uzoba nesisusa esingaphezulu sokufinyelela isithombe esihle ngesikhathi esifushane.
Ngenyanga ungasusa kusuka ku-figure yakho cishe ngamakhilogremu amahlanu noma ayisithupha. Futhi ngaphandle kokuzidela nokuhlukumeza okumelene wena nomzimba wakho.
Manje uzoba nesithombe esihle ngesikhathi esifushane!
Impilo ephelele ngokudla okunempilo efanele
Ama-apula ayaziwa njengezithelo eziwusizo kakhulu
I-cinnamon ne-vanilla: izakhiwo eziwusizo
Harm and benefit of isanqante juice
Izakhiwo zokwelapha zemifino yemifino
Indlela yokunciphisa ukusetshenziswa kweshukela?
Kuyini ukuhlanza ubuso be-ultrasonic
Indlela yokulungisa uhulumeni wosuku
4 izimfihlo zobuhle ezihle zikaMonica Bellucci: indlela yokubuka ku-53 kuya ku-35!
Indlela yokudukisa umfana: ubuciko bokukhohlisa
Indlela yokukhuluma nengelosi ngokusebenzisa amakhadi "Angelic"
Indlela yokubeka kahle ingane eneminyaka eyodwa ukuze ulale?
Itiye elihlaza: ukulimala nokuzuza
Indlela yokuhlobisa uKhisimusi indlu nokugubha iholide ekhaya ngezihlobo nabangane
Kungani ingane enobudlova?
UDmitry Tarasov ubonwe ngosuku olune-brunette, isithombe
Izinwele zakha kanjani izinwele?
Ama-champignon kuhhavini ye-microwave
Ukubhema kungumonakalo wangempela nokusetshenziswa kwenganekwane
UNelly Uvarova, izindaba zakamuva